बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डको चार घण्टा : के कुरा भयो ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच चार घण्टा छलफल भएको छ। बालुवाटारमा आइतबार बिहान १० बजेबाट २ बजेसम्म केन्द्रीय समितिमा लाने राजनीतिक एजेन्डामा छलफल भएको हो।
पार्टी एकताको १९ महिनापछि पुस २३ गते बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक राष्ट्रियसभाको निर्वाचन तयारीमा जुट्नुपर्ने भएकाले माघ १५ गतेका सारिएको थियो। गत मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म बसेको स्थायी समिति बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। यता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषयमा नेताबीच मतभेद हुँदा स्थायी समितिले निर्णय लिन सकेको छैन। बैठकमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने टुङ्गो नलागेकाले केन्द्रीय समितिमा कसरी पेश गर्ने भन्ने बारेमा पनि अध्यक्षद्वयबीच छलफल भएको स्रोत बताएको छ। पार्टीभित्रै एमसीसी चर्को बहसमा आएपछि यसलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेमा नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्।
नेकपा सचिवालय बैठक बसे पनि एमसीसीलाई छलफलको एजेन्डा बनाइएको छैन। तर पछिल्लो सचिवालयमा भने यस विषयमा नेताहरूले सामान्य परामर्श गरेर केन्द्रीय समितिमा छलफललाई छाड्ने सोच बनाएका छन्। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले एक प्रसंगमा एमसीसीको केन्द्रीय कमिटी छलफल हुने बताएका थिए । उनले भने , ‘अब केन्द्रीय कमिटीका सार्वभौम सदस्यले एमसीसीका विषयमा आफूलाई लागेका कुरा भन्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ। यो उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। उहाँहरूका प्रश्नको जवाफ पार्टी अध्यक्षले दिनुहुनेछ।’
स्थायी समितिमा पनि बहुमत सदस्य यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहने पक्षमा देखिएपछि केन्द्रीय समितिमा यसको विपक्षमै बहुमत पुग्ने देखिन्छ। अध्यक्ष दाहाल इन्डोप्यासिफिक अंग नभए पारित गर्नुपर्ने, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय रहेको छ। दुई अध्यक्षबीच भएको भेटमा उपसभामुख पद कुन दललाई दिने भन्ने विषयमासमेत छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। आइतबार सभामुखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद अग्‍निप्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण नेकपाको आग्रहमा डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिइसकेकी छन्। खाली रहेको उपसभामुख पदका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राजपा आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छ‍न्। संसदमा नेकपाको बहुमत रहेकाले नेकपाले चाहेको व्यक्ति नै उपसभामुख हुने भएकाले पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको हो।
Previous गोरखाका ६ पुल अलपत्र
Next अमेरिकामा ‘सम्पर्कविहीन’ उपमेयरबारे थप रहस्य यस्तो छ ! हेर्नुहोस्